Khasaaro ka dhashay Qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho, Booliska iyo Al shabaab oo ka hadlay – Somali Top News
Khasaaro ka dhashay Qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho, Booliska iyo Al shabaab oo ka hadlay
Ruux watay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa isku qarxiyay bar koontarool oo ciidamada amaanka ku leeyihiin agagaarka Isgooska KM-4 ee magaalada Muqdisho sidoo kale ku dhaw Hotelka Afrik.
Goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa aheyd meel mashquul badan oo ay joogeen gaadiid kala duwan oo wadada in ay maraan saf ugu jiray, waxaa sidoo kale goobtaasi ku yaalay goobo ganacsi .
Goojoogayaal ayaa ku waramay in qaraxa ku dhinteen dad ku dhaw 10-qof oo isugu jiray ciidamada amaanka iyo sidoo kale dad shacab ah oo halkaasi ku sugnaa, waxaa sidoo kale qaraxa ku dhaawacmay dad ka badan 10-qof.
Qaraxa ayaa sidoo kale bur buriyay gaadiid badan iyo xarumo ganacsi, waxaa sidoo kale la sheegay in qaraxa uu gubay kaalin shidaal oo ku taalay halka uu qaraxu ka dhacay, waxaana markii dambe lagu guuleestay daminta dabka uu qaraxu sababay.
Taliye kuxigeenka ciidanka booliiska Jeneraal Zakiya Xuseen ayaa sheegtay in qaraxa uu fuliyay ruux watay gaari NOAH ah oo doonayay in uu xoog kaga gudbo koonatroolka, waxa ayna sheegtay in qaraxa ku dhinteen ciidan iyo shacab.
Abbaarihii 10:40 subaxnimo ayee Ciidanka amniga ka hortagay baabuur noocisa yahay TOYOTA NOAH oo doonaayay inuu xoog ku maro checkpoint yaala KM4 halkaas oo uu ku qarxay. Waxaa qaraxaas ku dhintay askar iyo dad shacab ah, qaar kalena ay ku dhaawacmeen. Allah u naxariisto intii dhimatay inta dhawaacantay cafimaad dag dag ah inshallah.” ayey tiri Jeneraal Zakiya.
Dhinaca kale War kooban oo kasoo baxay Al Shabaab ayey ku sheegatay masuuliyada qarxaaasi, waxa ayna Al Shabaab sheegeen in qaraxa la eegteen koontarool ay joogeen ciidamada dowlada halkaasna ku dileen askar badan oo koontaroolka joogtay .
Qaraxan magaalada Muqdisho ka dhacay ayaa imaanaya xili ay xiran yihiin inta badan wadooyinka magaalada , waxaana la isweediinayaan sida ay gaadiidka qaraxyada wada mararka qaar uga gudbaan koontaroolada badan ee dhax yaala Muqdisho.
← Kenyan Treasury Cabinet Secretary Henry Rotich faces arrest
Car bomb blasts near Mogadishu airport 17 killed →
Ra’isul Wasaare Kheyre Oo Magacaabay Wasiiro Cusub
Ciidamada Ahlu-Sunna oo howlgallo kawada magaalada Dhuusamareeb
Wakiilka Q.M James Swan oo shacabka Somaliyed ugu hambalyeeyay Munaasabada 1da luulyo